အမေဇုန် တောနက်ကြီးထဲက လူသိနည်းလှတဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာများ – Daily News
အမေဇုန် တောနက်ကြီးထဲက လူသိနည်းလှတဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာများ
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အမေဇုန် တောနက်ကြီးထဲမှာ တွေ့ရှိနိုင်တဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာပေါ်က နာမည်ကြီး မိုးသစ်တော ဖြစ်တဲ့ အမေဇုန် တောနက်ကြီးထဲမှာ ဘယ်လို ထူးခြားတဲ့ အရာတွေ ရှိမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် .
၁ ။ ထူးဆန်းတဲ့ လူမျိုးစုများ
အမေဇုန် တောနက်ကြီးထဲမှာ ဆိုရင် လူမျိုးစု တွေ အတော်များများလည်း နေထိုင်ကြတာပါ ။ အချက်အလက်တွေအရတော့ ဒီ တောနက်ကြီးထဲမှာ နေကြတဲ့ လူမျိုးစုတွေဟာ သူတို့ အတွက် အစားအစာ ၊ အဝတ်အစား နဲ့ ဆေးဝါးတွေက အစ အမေဇုန် တောထဲကနေပဲ ရယူကြတာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ။ ဒါကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် လူမျိုးစုတွေဟာ အပြင်လောက နဲ့ သိပ်အဆက်အသွယ်မလုပ်ပဲ အမေဇုန်တောထဲမှာသာ အမြဲလိုလို နေထိုင်ကြတဲ့ သဘောပါပဲ ။ နောက်ထပ် ချီးကျူးစရာ ကောင်းတဲ့အချက်က သူတို့ဟာ အမေဇုန် တောနက်ကြီးကို အမှီသဟဲပြုပြီး နေကြပေမယ့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဂေဟ စနစ်ကိုတော့ သိပ်မထိခိုက်စေပဲ ထိန်းသိမ်းကြ ပါတယ်တဲ့ ။
၂ ။ ပလတ်စတစ် စားတဲ့ မှိုလေးများ
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့ အမေဇုန် တောထဲက ပလတ်စတစ် စားတဲ့ မှိုလေးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ နာမည်ကတော့ Pestalotiopsis Microspora ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပလတ်စတစ် ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတာပါ ။ဒီမှိုလေးတွေကိုတော့ Yale တက္ကသိုလ် က ကျောင်းသူတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Pria Anand ဆိုသူက အမေဇုန်တောထဲမှာ ရှာတွေ့ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမဟာ ထို မှိုလေးတွေ ရဲ့ နမူနာ ပေါင်း ( ၆၀ ) လောက်ကို သုတေသန လုပ်ခဲ့ပြီး ဒီအထဲက တစ်ခုဟာဆိုရင် အောက်ဆီဂျင် မလိုပဲ အသက်ရှင်နိုင်တာကိုတောင် ရှာတွေ့ခဲ့ပါသေးတယ် ။
၃ ။ ကျည်ဆန် ပုရွက်ဆိတ်
အခု ပြောပြပေးမှာကတော့ အမေဇုန်တောထဲ ရောက်ရင် လုံးဝ ရှောင်သင့်တဲ့ ပုရွက်ဆိတ် အကြောင်းကို ပြောပြပေးမှာပါ ။ ဒီ ပုရွက်ဆိတ်တွေ ကို တရားဝင် ပေးထားတဲ့ နာမည်မရှိပေမယ့်လည်း အများစုကတော့ ကျည်ဆန် ပုရွက်ဆိတ်လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ် ။ အခုလို နာမည် ပေးရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ထို ပုရွက်ဆိတ် တစ်ခါ ကိုက်တာခံရရင် ကျည်ဆန် မှန်သလိုမျိုး နာရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက် တစ်ချက်ကတော့ ကျည်ဆန် ပုရွက်ဆိတ်တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်က အကြီးဆုံး ပုရွက်ဆိတ် မျိုးစိတ်တွေ ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားကလည်း ကျည်ဆန် တစ်တောင့် အရွယ်အစား ရှိပါတယ်တဲ့ ။
၄ ။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပန်းပွင့်
ဒီတစ်ခါ ပြောပြပေးမှာကတော့ အမေဇုန်တောထဲမှာ ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပန်းပွင့်ကြီး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ နာမည်ကတော့ Rafflesia လို့ ခေါ်ပြီး ကမ္ဘာ့အရှားပါးဆုံး ပန်း စာရင်းထဲမှာလည်း ပါဝင်ထားပါသေးတယ် ။ ဒီ ပန်းပွင့် အကြောင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် သူ့မှာ အမြစ်လည်း မရှိသလို ပင်စည်တွေ ၊ အရွက်တွေလည်း မရှိပါဘူးတဲ့ ။ ထူးခြားချက်ကတော့ ထို ပန်းပွင့်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အရွယ်အစား တစ်ခုထဲ ကြောင့် နာမည်ကြီးနေတာ မဟုတ်ပဲ သူ့ရဲ့ အနံ့ကလည်း အသားပုပ် နံ့လိုမျိုး ရှိတာကြောင့် ထူးဆန်းတယ်လို့ ပြောရမှာပါ ။ လက်ရှိမှာတော့ Rafflesia ပန်းတွေဟာ မျိုးတုန်းနိုင်တဲ့ အပင်စာရင်းထဲ ပါဝင်နေတာကြောင့် သဘာပတ်ဝန်းကျင် အဖွဲ့တွေက ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ပေးထားရပါတယ် ။
၅ ။ ရေပေါ်ပြေးနိုင်တဲ့ ဖွတ်ပုတက်
နောက်တစ်ခုကတော့ ထူးထူးခြားခြား အနေနဲ့ ရေပေါ်မှာ ပြေးနိုင်တဲ့ ဖွတ်ပုတက် အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ အကောင်လေးတွေကို Jesus Lizards လို့ ခေါ်ကြပေမယ့် များသောအားဖြင့်ကတော့ basilisks ဆိုပြီး ခေါ်ကြတာပါ ။ Basilisks လေးတွေကို နာမည်ကြီးစေတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ သူတို့ရဲ့ ရေပေါ်မှာ ပြေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီစွမ်းရည်ကိုတော့ အမဲလိုက်တဲ့အခါ နဲ့ သားကောင် လက် က လွတ်အောင် ပြေးတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်တဲ့ ။ ဒါ့အပြင် Basilisks အကောင်လေးတွေဟာ အမေဇုန်တောထဲက ရေကန် နဲ့ မြစ်ဖျားအနီးနားတွေမှာ အနေများလေ့ရှိကြပါတယ် ။
၆ ။ ရှေးခေတ်ကလူတွေ အခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ နေရာများ
အခုနောက်ဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ ရှေးခေတ်က လူတွေ အမေဇုန်တောထဲမှာ အခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေရာတွေကိုတော့ ( ၂၀၁၈ ) ခုနှစ် မှာ သုတေသီ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ရှာတွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လေ့လာကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ( ၁၂၅၀ ) ကနေ ( ၁၅၀၀ ) ခုနှစ်တုန်းက နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အမေဇုန်တောကြီးထဲမှာ အခုလိုမျိုး အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ နေရာဟောင်းတွေ ရာနဲ့ချီ ရှိပါသေးတယ်တဲ့ ။ ဒီ နေရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပညာရှင်တွေ အကြားမှာ သဘောထား အမြင်မတူတာတွေ ရှိနေသေးတာကြောင့် ယနေ့အချိန်အထိ အသေးစိတ် လေ့လာနေကြသေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ အမေဇုန် တောနက်ကြီးထဲမှာ တွေ့ရှိနိုင်တဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာတွေထဲက တစ်ချို့ကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော်
အခုတဈခါမှာတော့ ပရိသတျကွီးကို ပွောပွပေးခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာလေးကတော့ အမဇေုနျ တောနကျကွီးထဲမှာ တှရှေိ့နိုငျတဲ့ ထူးထူးခွားခွား အရာတှေ အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ကမ်ဘာပျေါက နာမညျကွီး မိုးသဈတော ဖွဈတဲ့ အမဇေုနျ တောနကျကွီးထဲမှာ ဘယျလို ထူးခွားတဲ့ အရာတှေ ရှိမလဲဆိုတာကတော့ အောကျကပုံလေးတှေ တဈပုံခငျြးစီကို ကွညျ့လိုကျပါဦးနျော .
အမဇေုနျ တောနကျကွီးထဲမှာ ဆိုရငျ လူမြိုးစု တှေ အတျောမြားမြားလညျး နထေိုငျကွတာပါ ။ အခကျြအလကျတှအေရတော့ ဒီ တောနကျကွီးထဲမှာ နကွေတဲ့ လူမြိုးစုတှဟော သူတို့ အတှကျ အစားအစာ ၊ အဝတျအစား နဲ့ ဆေးဝါးတှကေ အစ အမဇေုနျ တောထဲကနပေဲ ရယူကွတာ ဖွဈပါတယျတဲ့ ။ ဒါကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ လူမြိုးစုတှဟော အပွငျလောက နဲ့ သိပျအဆကျအသှယျမလုပျပဲ အမဇေုနျတောထဲမှာသာ အမွဲလိုလို နထေိုငျကွတဲ့ သဘောပါပဲ ။ နောကျထပျ ခြီးကြူးစရာ ကောငျးတဲ့အခကျြက သူတို့ဟာ အမဇေုနျ တောနကျကွီးကို အမှီသဟဲပွုပွီး နကွေပမေယျ့ သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြ ဂဟေ စနဈကိုတော့ သိပျမထိခိုကျစပေဲ ထိနျးသိမျးကွ ပါတယျတဲ့ ။
နောကျထပျပွောပွပေးမှာကတော့ အမဇေုနျ တောထဲက ပလတျစတဈ စားတဲ့ မှိုလေးတှေ အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ သူတို့ရဲ့ နာမညျကတော့ Pestalotiopsis Microspora ဖွဈပွီး ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ ပလတျစတဈ ညဈညမျးမှုကို ဖွရှေငျးပေးနိုငျတယျလို့ သတျမှတျခံထားရတာပါ ။ဒီမှိုလေးတှကေိုတော့ Yale တက်ကသိုလျ က ကြောငျးသူတဈဦး ဖွဈတဲ့ Pria Anand ဆိုသူက အမဇေုနျတောထဲမှာ ရှာတှခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ သူမဟာ ထို မှိုလေးတှေ ရဲ့ နမူနာ ပေါငျး ( ၆၀ ) လောကျကို သုတသေန လုပျခဲ့ပွီး ဒီအထဲက တဈခုဟာဆိုရငျ အောကျဆီဂငျြ မလိုပဲ အသကျရှငျနိုငျတာကိုတောငျ ရှာတှခေဲ့ပါသေးတယျ ။
အခု ပွောပွပေးမှာကတော့ အမဇေုနျတောထဲ ရောကျရငျ လုံးဝ ရှောငျသငျ့တဲ့ ပုရှကျဆိတျ အကွောငျးကို ပွောပွပေးမှာပါ ။ ဒီ ပုရှကျဆိတျတှေ ကို တရားဝငျ ပေးထားတဲ့ နာမညျမရှိပမေယျ့လညျး အမြားစုကတော့ ကညျြဆနျ ပုရှကျဆိတျလို့ နာမညျပေးထားပါတယျ ။ အခုလို နာမညျ ပေးရတဲ့ အကွောငျးကတော့ ထို ပုရှကျဆိတျ တဈခါ ကိုကျတာခံရရငျ ကညျြဆနျ မှနျသလိုမြိုး နာရလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ ။ နောကျ တဈခကျြကတော့ ကညျြဆနျ ပုရှကျဆိတျတှဟော ကမ်ဘာပျေါက အကွီးဆုံး ပုရှကျဆိတျ မြိုးစိတျတှေ ဖွဈပွီး အရှယျအစားကလညျး ကညျြဆနျ တဈတောငျ့ အရှယျအစား ရှိပါတယျတဲ့ ။
ဒီတဈခါ ပွောပွပေးမှာကတော့ အမဇေုနျတောထဲမှာ ရှိတဲ့ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး ပနျးပှငျ့ကွီး အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ သူ့ရဲ့ နာမညျကတော့ Rafflesia လို့ ချေါပွီး ကမ်ဘာ့အရှားပါးဆုံး ပနျး စာရငျးထဲမှာလညျး ပါဝငျထားပါသေးတယျ ။ ဒီ ပနျးပှငျ့ အကွောငျးကို ပွောရမယျဆိုရငျ သူ့မှာ အမွဈလညျး မရှိသလို ပငျစညျတှေ ၊ အရှကျတှလေညျး မရှိပါဘူးတဲ့ ။ ထူးခွားခကျြကတော့ ထို ပနျးပှငျ့တှဟော သူတို့ရဲ့ အရှယျအစား တဈခုထဲ ကွောငျ့ နာမညျကွီးနတော မဟုတျပဲ သူ့ရဲ့ အနံ့ကလညျး အသားပုပျ နံ့လိုမြိုး ရှိတာကွောငျ့ ထူးဆနျးတယျလို့ ပွောရမှာပါ ။ လကျရှိမှာတော့ Rafflesia ပနျးတှဟော မြိုးတုနျးနိုငျတဲ့ အပငျစာရငျးထဲ ပါဝငျနတောကွောငျ့ သဘာပတျဝနျးကငျြ အဖှဲ့တှကေ ထိနျးသိမျး စောငျ့ရှောကျ ပေးထားရပါတယျ ။
နောကျတဈခုကတော့ ထူးထူးခွားခွား အနနေဲ့ ရပေျေါမှာ ပွေးနိုငျတဲ့ ဖှတျပုတကျ အကွောငျးကို ပွောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ဒီ အကောငျလေးတှကေို Jesus Lizards လို့ ချေါကွပမေယျ့ မြားသောအားဖွငျ့ကတော့ basilisks ဆိုပွီး ချေါကွတာပါ ။ Basilisks လေးတှကေို နာမညျကွီးစတေဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ သူတို့ရဲ့ ရပေျေါမှာ ပွေးနိုငျတဲ့ စှမျးရညျကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဒီစှမျးရညျကိုတော့ အမဲလိုကျတဲ့အခါ နဲ့ သားကောငျ လကျ က လှတျအောငျ ပွေးတဲ့အခါမှာ အသုံးပွုလရှေိ့ပါတယျတဲ့ ။ ဒါ့အပွငျ Basilisks အကောငျလေးတှဟော အမဇေုနျတောထဲက ရကေနျ နဲ့ မွဈဖြားအနီးနားတှမှော အနမြေားလရှေိ့ကွပါတယျ ။
အခုနောကျဆုံး ပွောပွပေးမှာကတော့ ရှေးခတျေက လူတှေ အမဇေုနျတောထဲမှာ အခွခေနြထေိုငျခဲ့တဲ့ နရောတှေ အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဒီနရောတှကေိုတော့ ( ၂၀၁၈ ) ခုနှဈ မှာ သုတသေီ အဖှဲ့တဈဖှဲ့က ရှာတှခေဲ့တာ ဖွဈပွီး လလေ့ာကွညျ့တဲ့ အခါမှာတော့ လှနျခဲ့တဲ့ ( ၁၂၅၀ ) ကနေ ( ၁၅၀၀ ) ခုနှဈတုနျးက နထေိုငျခဲ့ကွတဲ့ နရောတှေ ဖွဈနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးခဲ့ကွပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ အမဇေုနျတောကွီးထဲမှာ အခုလိုမြိုး အခွခေနြထေိုငျခဲ့ကွတဲ့ နရောဟောငျးတှေ ရာနဲ့ခြီ ရှိပါသေးတယျတဲ့ ။ ဒီ နရောတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး ပညာရှငျတှေ အကွားမှာ သဘောထား အမွငျမတူတာတှေ ရှိနသေေးတာကွောငျ့ ယနအေ့ခြိနျအထိ အသေးစိတျ လလေ့ာနကွေသေးတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
အခုဖျောပွပေးထားတာကတော့ အမဇေုနျ တောနကျကွီးထဲမှာ တှရှေိ့နိုငျတဲ့ ထူးထူးခွားခွား အရာတှထေဲက တဈခြို့ကို ပွောပွပေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ နောကျပိုငျးတှမှောလညျး အခုလိုမြိုး စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှကေို ရှာဖှတေငျဆကျပေးမှာမို့လို့ စောငျ့မြှျောဖတျရှုပေးကွပါဦးနျော
ဇနီးချောလေး ၄ယောက်ယူထားသည့်အပြင် အရံမိန်းကလေး ၁၆ယောက်ကိုပါ အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားသော သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးတစ်ဦး
အစ်မရဲ့ပြသနာတွေကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာရသွား လို့ ခံစားနေရတာတွေမရှိအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှိပ်စက်နေတဲ့ သံစဉ်မောင်
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ အမှန်တကယ် တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ရေသူမတွေရဲ့...